Thick White ID Card, အဖြူရောင် ID ကိုထူထပ်သောကတ်, Inductive Thick ID Card, identification ကဒ်, Access Control Card ကို, Access Control ID Card, 125KHz Thick White Card, 125KHz Thick Blank Card, 125KHz Thick Card
ထူသောကတ် 125KHz Thick White Card, Access Control ID Card, identification ကဒ်, Inductive Thick ID Card, Thick White ID Card
125KHz ID Thick Card, အဆင်ပြေပြေနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့, တန်ဖိုးနည်း access ကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်မှတ်ပုံတင်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်သင့်လျော်သော.
induction အကွာအဝေး: 8~ 20cm
internal အမှတ်စဉ်ကုဒ်:5bytes
သုတ်: >100,000 ကြိမ်
အပြည့်အဝသတ်မှတ်ခြင်းကဒ်ကိုခေါ် ID ကိုကတ်, က chip ကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဒေတာ induction ကဒ်ကိုရေးမရနိုငျဖြစ်ပါတယ်, သတ်မှတ်ထားတဲ့ကုဒ်ရှိ, ထိုင်ဝမ် SYRIS EM ပုံစံနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု HIDMOTOROLA ပုံစံနှင့် ID ကိုကတ်၏အခြားမျိုးအဓိကအားရှိပါတယ်. သံလိုက်အစင်းကဒ်နှင့်အတူတူညီ ID ကိုကဒ်, ရုံကိုသုံးပါ "ကတ်နံပါတ်", ကဒ်အရေအတွက်အပြင်, အဆိုပါကဒ်၏အတွင်းပိုင်းမဆိုလျှို့ဝှက် function ကိုရှိသည်ပါဘူး, ကဒ်အရေအတွက်ကဖွင့်, အဝတ်မပါသော. ဒီတော့ ID ကိုကဒ်ဖြစ်ပါသည် "inductive သံလိုက်ကဒ်" .
အထူ ID ကိုကဒ်တွေကို RF IC ကဒ်၏အရှိဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦး၏ ID နံပါတ် ( ပုံနှိပ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် 18 ဂဏန်းသို့မဟုတ် 10 ဂဏန်း, 8 ဂဏန်းအရေအတွက်က ), တစ်ဦးခရီးဆောင်အပေါက်နှင့်အတူ, ပုံနှိပ်ခြင်းလိုဂိုသို့မဟုတ်စာသားသတင်းအချက်အလက်များကိုပြနိုင်ပါတယ်.
Thin ID card surface can offset printing, မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း, ပုံနှိပ်ခြင်းပုံတူ, ပုံနှိပ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် 18 ဂဏန်းသို့မဟုတ် 10 ဂဏန်း, 8 ဂဏန်းအရေအတွက်က.
ID thick card usually use 125KHz EM4102, TK4100, TK4101 chip ကို, 13.56MHz chip ကိုလည်းသုံးနိုင်တယ်, ထိုကဲ့သို့သော FM11RF08 သို့မဟုတ် Mifare 1k S50 အဖြစ်.
The induction coil inside the 125KHz ID thick card hasalarge rectangular coil andacircular coil to choose from. အနည်းငယ်ပိုရှည်အကြီးစား rectangular ကွိုင်ဖတ်အကွာအဝေး.
Card to the card reader data transfer rate of 3.9 KBPS (THRC12) သို့မဟုတ် 6.62 KBPS (THRC13);
The data store adopts EEPROM, the data preservation time exceeds 10 နှစ်ပေါင်း;
Data storage capacity of 64 -bits, including manufacturers, distributors and user code;
မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထား, အချိန်တက်ရောက်သူ, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, ဝင်ပေါက်ကိုယ်ရံတော်စနစ်က, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်, ကင်းလှည့်စနစ်အား, enterprises One Card Solution, နှင့်ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းဖော်ထုတ်ခြင်း IC ကဒ်စနစ်၏အခြားအ.
prev: T5577 Chip ထူထပ်သောကတ်, T5577 Shell ကကဒ်, T5577 Encrypted ထူထပ်သောကတ်
နောက်တစ်ခု: TK4100 Chip ထူထပ်သောကတ်, TK4101 Chip ထူထပ်သောကတ်, 125kHz သတ်မှတ်ခြင်းထူထပ်သောကတ်